Ikhaya AMAZIKO E-EUROPEAN FOOTBALL I-Milan Skriniar Ibali lokuKhula koMntwana kunye neNqaku le-Biology ye-Milold
Ibali lethu leMilan Skriniar Biology ikunika iinkcukacha zeBali lakhe lobuNtu, uBomi boLwangaphambili, uBazali, uBomi boSapho, uBomi boThando (Iinyani zamantombazana kunye nomfazi), Mzalwana, uBomi boBuntu kunye neNdlela yokuphila. Siyakunika Iziganeko ezibalulekileyo ukususela ngexesha awayengaziwa ngalo xa wayesaziwa.
Ewe, wonke umntu uyazi ukuba iziko libuyile li-tackler eqinile ekhawulezayo ukwenza ngokucacileyo. Nangona kunjalo, ababaninzi abaye bafunda i-biography kaMilan Skriniar, enika iakhawunti epheleleyo yeziganeko ezincinci ezithandekayo ebomini bakhe. Ngaphandle kokuqhubeka ngakumbi, masiqalise.
IMbali yoMntwana uMilan Skriniar:
Kwabaqalayo bio, umgcini webhola nguSlovak. Wazalwa ngomhla we-11 kuFebruwari 1995 e-Žiar nad Hinto, isixeko eSlovakia. UMilan ngomnye phakathi kwabantwana abangaphantsi kwesibini esizelwe kunina omncinci owaziwayo kunye notata wakhe ohamba ngegama Ľubomír Šisanoar.
Imvelaphi yosapho yeMilan Skriniar:
Iziko elingasemva sisiSlovakian ngenxa yokuzalwa. Iziphumo zophando kwiintsapho zakhe zibonisa ukuba ungumntu wohlanga lwaseSlovenska. Uhlanga lubalasele eSlovakia.
UMilan Skriniar Okhulayo Iminyaka:
Umdlali webhola webhola ekhatywayo wexesha elizayo wakhula kwisixeko sakhe sokuzalwa e-Žiar nad Hinto kunye nomzalwana osele ekhulile. Ukukhula esixekweni, uMilan wayenephupha elinye lobuntwana. Iphupha yayikukuba abe ngumdlali webhola kwaye adlale iqela leeklabhu ezinkulu.
Imvelaphi yoSapho lweMilan Skriniar:
Inyaniso ixelelwe, amaphupha ebhola leSlovak ayenento yokwenza nokuba azalelwe kwindlu ethandekayo kwezemidlalo. Ngapha koko, utata kaMilan wayengumdlali webhola ekhatywayo ngelixa umntakwabo omdala wayenembali edlala umdlalo.
Uqala njani uKhathalelo lwebhola kwiMilan Skriniar:
Ke, akumangalisi ukuba aqale ukuziqeqesha kunye ne-sideiar nad Hologist yasekhaya ngaphambi kokuba abe neminyaka eli-10 ubudala. Ngexesha uMilan wayeneminyaka eli-12 ubudala, wayishiya iklabhu yakhe yasekhaya ukuba aqalise umsebenzi onyanisekileyo wokuhlaziya uM withK Žilina.
KwakuseMŠK Žilina ukuba umfundi webhola ekhatywayo uchithe iminyaka emininzi yobomi bakhe ephuhlisa izakhono zobuchule ezaziza kumenza asondele kwiphupha lakhe lokudlalela iiklabhu ezinkulu. Kwincopho yobomi bakhe kunye no-Žilina, uMilan wenza iqela lakhe lokuqala iqela ukuba lilungu kumdlalo weSlovak Super Liga nxamnye neFi ViOn Zlaté Moravce. Wathunyelwa kwiklabhu ngemboleko-mali.
I-Milan Skriniar Biography-Indlela eya kuLwazi ngeNdawo:
Ngaba uyazi ukuba umncinci waseSlovak waqala umsebenzi wakhe webhola ekhatywayo njengomhlaseli ongenalunya owayehlukumeza intsholongwane ephikisayo? Nangona kunjalo waba liqela eliphakathi eMŠK Žilina.
Utshintsho olulandelayo kwisikhundla seetalente zebhola ekhatywayo wambona etshintshana nokudlala kwinqanaba leziko elibuyela kuZlaté Moravce (2013) kunye ne-Itali Sampdoria yase-Itali apho wayenomlinganiso omnye unyaka (ngo-2016 ukuya ku-2017).
I-Biografia yeMilan Skriniar- Rise to Fame Ibali:
Xa iziko libuyele ekugqibeleni lishiye uSampdoria kwi-Inter Milan, ukufika kwakhe kwafika entloko kuba imali yokudluliselwa kwezigidi ezingama-20 yamenza ukuba abengumdlali obiza kakhulu weSlovak ngalo lonke ixesha.
Ngokungathandabuzekiyo, okuninzi iziko libuyele umva ngexesha lakhe lokuqala (ngo-2017 ukuya ku -2018) kunye neNerazzurri kwaye yabanceda bafumana indawo kwi-UEFA Champions League okokuqala kwiminyaka emithandathu. Ukuphumla njengoko besithi yimbali.
UMilan Skriniar Uthando uBomi-Ntombazana, Umfazi, abantwana?
Kukho abantu abaphikisayo abanokubethwa yintliziyo yeSlovak. Omnye wabo yintombi yakhe kunye nemodeli, uBarbora Hroncekova. Iibhanti zothando bezisisibini ukusukela oko uMilan wayedlalela uSampdoria.
U-Tho engekabi ngumfazi kaMilan, iphepha le-Instagram likaBarbora elibonisa igama lesibongo ecaleni kwakhe. Akukho namnye duo ononyana (s) okanye intombi (s) ngaphandle komtshato kwaye iya kuba yinto yexesha ngaphambi kokuba iintsimbi zomtshato zikhale kubo.
Ubomi boSapho boMilan Skriniar:
Phambi kokuba intombi yomkhuseli ingene emfanekisweni, utata wakhe, umama kunye namanye amalungu osapho bangumthombo weipesenti ezilikhulu zothando nenkxaso ayifumeneyo. Sikuzisa iinyani malunga notata kaMilan Skriniar kunye nonina kunye nabantakwabo kunye nezihlobo. Ngaphandle kokuqhubeka, ivumela inkqubela.
Malunga nabazali bakaMilan Skriniar:
Ukuqala, u-Ľubomír Šisanoar nguyise weziko ngasemva. Wayeyintshatsheli yebhola ekhatywayo kwaye waba negalelo elibonakalayo ekuncedeni iziko libuyele ekuvuseleleni ukuthanda umdlalo ngokungapheliyo.
Ngexesha lokumisela iMilan Skriniar's bio, utata wakhe ugcina uhlalutyo lweengcali malunga nokusebenza kwonyana wakhe kwaye engazange ayeke ukumkhapha ukuba aphumelele. Kwicala lakhe, ayaziwa kangako indawo yo mama basemva. Kodwa akukho sigqibo sisigqibo sokuba uyajoyina amanye amalungu osapho lakhe ukubukela iziko elidlalayo libukhoma.
Malunga nabantakwabo bakaMilan Skriniar kunye nezihlobo:
Umkhuseli ophakathi akazange akhule nje ecaleni, ecaleni kukamama notata. Kude kubazali bakaMilan Skriniar, unomzalwana omncinci owaziwayo owayekwibhola ekhatywayo kodwa akazange aphumelele njengengcaphephe.
Ngokuphathelele kwimvelaphi yosapho nakwizalamane zikaMilan Skriniar, akukho zirekhodi zikatatomkhulu noomakhulu. Ngokukwanjalo ayingomninzi owaziwayo ngoomalume bakhe, oomalume noomazala bakhe. Uphuhliso luhamba ngakwibhodi yabatshana bakhe kunye nabatshana.
Ubomi bobuqu bukaMilan Skriniar:
Thetha ngemikhwa echaza umntu wakhe, ngaba ubusazi ukuba uqhutywa yinkanuko, ugxile kunye nokuthobeka? Ukongeza, iziko ngasemva linamabhongo kunye nokusebenza nzima njengabantu abazalwe phantsi komqondiso we-Aquarius zodiac.
Xa uMilan engaqeqeshanga okanye edlala ibhola unokufunyanwa enomdla kwizinto ezimbalwa azithandayo kunye nokuzonwabisa. Babandakanya ukufunda, ukudlala ividiyo, ukuhamba kunye nokuchitha ixesha kunye nosapho kunye nabahlobo.
Ubomi boMilan Skriniar:
Umkhuseli ophakathi unexabiso eliqikelelweyo lezigidi ezi-4 zeerandi ukusukela ngonyaka wama-2020. Imithombo yemali enegalelo kubutyebi bomdlali yimivuzo nemirholo ayifumanayo yokuba liziko elimangalisayo emva.
Ingcaphephe yebhola ekhatywayo ikwazuza imali eninzi ngokudlulisa. Ngobutyebi obuninzi kuza ubomi obutofotofo. KuMilan, ubomi obumnandi buquka ukuhlala kumagumbi endlela, ukuqhuba iimoto ezingaqhelekanga kunye nokuchitha ixesha elisemgangathweni kwiindawo ekuchithelwa kuzo iiholide ezibizayo.
Izibakala zikaMilan Skriniar:
Ukusonga ibali lethu lobuntwaneni kunye nenyaniso ye-biography, nazi iinyani ezingaziwa okanye ezingachazwanga malunga neziko ngasemva.
Inyani # 1 - Inqanaba 2020 leFIFA:
Ngaba uyazi ukuba iMilan Skriniar inenqanaba elifanelekileyo leFIFA lamanqaku angama-86? Kuluhlu olunje, umfutshane nje ngokufumana amanqaku ayi-5 UVirji Van Dijk kunye nenqaku elingcono kune Niklas Sule Unomlinganiso wamanqaku ayi-85.
Inyani # 2 - Inkolo kaMilan Skriniar:
Emva kophando oluninzi, sifikelele kwisigqibo malunga noku. Inyani yile, kunzima kakhulu ukuchaza ngokuqinisekileyo ukuba luhlobo luni lwenkolo eyenziwa yiSkriniar kuba engashiyanga naziphi na izikhombisi. Ngapha koko, umbuzo omkhulu ngowokuba ingaba iziko lasemva likholwa okanye hayi.
Inyaniso # 3 - Imfuyo ka-Milan Skriniar:
Njengobuninzi bebhola ekhatywayo, umgcini webhola usoloko wamkelwa ngezandla ezishushu kwinja yakhe yasekhaya nangaliphi na ixesha efika ekhaya. Isidalwa esincinci esimhlophe ebesineminyaka kunye noMilan iminyaka kwaye sihlala sivela kwiifoto ze-Instagram kunye naye.
Igama eliphelele UMilan Šisanoar
Umhla wokuzalwa Ngomhla we-11 kuFebruwari ngo-1995
Indawo yokuzalelwa I-Hologist yeHiar nad eSlovakia
Ukudlala Indawo IZiko lokuBuya
abazali Ľubomír Šabiniar (uBawo)
umvuzo 5.5 yezigidi zeerandi
Ubungakanani benethi 4 yezigidi zeerandi
ukuphakama Iinyawo ezi-6 ii-intshi.
Iklabhu Yabafana Inqaku leNdalo
ukuzenza Ukusasaza, ukudlala imidlalo yevidiyo, ukuhamba kunye nokuchitha ixesha elifanelekileyo nosapho kunye nabahlobo.
Enkosi ngokufunda ukubhala okuzibandakanya kwi-biography kaMilan Skriniar. Siyakholelwa ngoku ukuba uyamazi kwaye uyamxabisa ngokuba ungubani kwaye ude kangakanani kwihlabathi lebhola ekhatywayo. Siyathemba ukuba ukufumene iziqulatho esizibekileyo malunga naye ukuba zichaneke kwaye zichaneke? ukuba akukhange kubenjalo, nceda utsalele ingqalelo yethu kuyo nayiphi na into engakhange ilunge ngokusebenzisa ibhokisi yokuphawula.
Romelu Lukaku Ubuntwana Ibali Plus Untold Biography Facts
Umhla oLungisiweyo: nge-24 kaSeptemba ngo-2020